“म राजाबादी होईन, तर महेन्द्रको राष्ट्रवाद मलाई मन पर्छ” देवकोटाले अन्तर्वार्ता दिदै भनेका थिए, “अझै २० बर्ष जति बाच्छु भन्ने लागेको छ” (भिडियोसहित) – Etajakhabar
डा. उपेन्द्र देवकोटा, बरिष्ठ न्यूरोसर्जन, पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीबरिष्ठ न्यूरोसर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटा ओपिडीमा बिरामी जाँचिसकेर हँसिलो मुद्रामा आफ्नो कार्यकक्षमा दाखिला भए । अन्तरवार्ताका लागि क्यामेरा सोझ्याएर हामी पहिल्यै त्यहाँ तैनाथ थियौं । क्यामेरालाई एकैछिन पजमा राख्न लगाएर केहीबेर उनी समसामयिक विषयहरुमाथि चर्चा छेड्न थाले ।बर्तमान सरकारका बारेमा उनको कडा टिप्पणी थियो, “यो राष्ट्रियता नै खल्बल्याउने गरी गरिएको सत्ता परिवर्तन हो । जो खतरनाक मात्रै होईन, घातक पनि छ ।”गोर्खाको अमर ज्योति जनता हाइ स्कूलमा डा. बाबुराम भट्टराईका सहपाठी डा. देवकोटा बर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग मात्रै होईन, सम्पूर्ण गणतान्त्रिक परिवर्तनहरुसँगै असन्तुष्टि ब्यक्त गरिरहेका थिए । मुलुक राजनीतिक रुपमा स्किजोफे्रनिक मात्रै होईन, मेगालोमेनियाग्रस्त भएको उनको डायग्नोसिस् थियो ।
न्यूरो हस्पिटलका संस्थापक उनले भन्न भ्याए, “नेपालमा अन्य ब्यवस्थाहरु तुहिए जस्तै गणतन्त्र पनि अवश्य तुहिनेछ । नेपाल जस्तो देशमा भारतीय संविधानको फोटोकपी लादेर नेताहरुले गर्न खोजेको काम जनताको सर्वोपरी हित बिपरित त छ नै, घातक पनि छ ।”
सन् १९७८ मा भारतको डिब्रुगढ युनिभर्सिटी अन्तर्गत आसाम मेडिकल कलेजबाट मेडिसिन र सर्जरीमा एमबिबिएस गरेपश्चात बेलायतको एटकिन्सन मोर्लि हस्पिटलमा न्यूरोसर्जरीमा बिशिष्टता हासिल गरेका डा. देबकोटाले सन् १९८९ मा स्वदेश फर्किएर नेपालमा नै पहिलो पटक वीर अस्पतालमा न्यूरोसर्जरी ट्रमा युनिटको स्थापना गरेका थिए ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको मन्त्रिपरिषदमा स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतले सामेल हुँदा निकै आलोचना खेपेका डा. देवकोटाले एक कप चिया पिएर आफूलाई रिफ्रेश गरेपछि अन्तरवार्ताका क्रममा भने, “म राजाबादी होईन । तर महेन्द्रको राष्ट्रवाद मलाई मन पर्छ ।”गोर्खामा जन्मिएका ६३ वर्षीय उनी राजनीतिमा चासो राख्ने खरो र स्पष्ट वक्ताकाे रुपमा चिनिन्छन् । देशको अस्थिर राजनीति, मौलाइरहेको भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, कालोबजारी जस्ता कुराले अन्त्यतः देश खोक्रिसकेको उनको निष्कर्ष थियो ।
नेताहरु मुलुकका यस्ता जल्दाबल्दा समस्याहरुलाई समाधान गर्न छाडेर सत्ताको भागबण्डा र लुछाचुँडीमा लाग्नुले देशमा खतराको घण्टी बजेको चेतावनी समेत उनले दिए ।भारतको नेपालमाथिको इन्टे्रस्ट मधेसको नाउँमा पानी भएको ठहर गर्दै उनी भन्छन्, “भबिष्यमा हाइड्रोपावर भन्दा पनि प्यूँने पानीको हाहाकार हुने हुँदा भारत मधेसमार्फत नेपालका पहाड र हिमालसम्म कब्जा जमाउन चाहन्छ । यसैले ऊ हाम्रो देशमाथी गिद्दे नजर लगाउन छोड्दैन । र, नेपालमा भारतसँग आँखा जुधाएर निडर कुरा राख्न सक्ने नेतै छैनन् ।
जे छन्, उसैका गुलाम छन् ।”भारत ब्रिटिसकाे उपनिवेशबाट आजाद भए पनि साठी वर्षसम्म आइ कांग्रेसको गुलामीमा फँसेको र हाल त्योबाट बिस्तारै निस्कदैं गरेको चर्चा गर्दै डा. देवकोटाले भने , “त्यसलाई (आइ कांग्रेस) म काला ब्रिटिसहरूकाे शासन भन्न मन पराउँछु । जसले हाम्रो मुलुकलाई पनि संक्रमित तुल्याएको छ ।”
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आषाढ ०५, २०७५ समय: १४:५९:२७